Agụmakwụkwọ Twin Dijitalụ: Nkà ihe ọmụma maka mgbanwe dijitalụ ọhụrụ - Geofumadas
Ihe ọhụrụ ọ bụla nwere ndị na -eso ụzọ ya bụ ndị, mgbe etinyere ya n'ọrụ, gbanwere ọrụ dị iche iche. PC gbanwere ụzọ anyị si ejikwa akwụkwọ anụ ahụ, CAD zitere tebụl ihe osise n'ụlọ nkwakọba ihe; email ghọrọ usoro ndabere nke nkwukọrịta nkịtị. Ha niile mechara na -agbaso ụkpụrụ anabatara n'ụwa niile, opekata mpe site n'echiche onye na -ebubata ya. Mgbanwe na mgbanwe dijitalụ gara aga gbakwunyere ozi ala na mkpụrụedemede, nke nyere aka n'otu aka ike azụmahịa ọgbara ọhụrụ. Mgbanwe ndị a niile dabere na njikọta ụwa; ya bụ, usoro “http” nke anyị ka na -eji taa.
Ọ dịghị onye nwere ike ikwe nkwa ọdịdị ala dijitalụ ọhụrụ; Ndị isi ụlọ ọrụ na -atụ aro na usoro tozuru oke ma dị mma ga -enyere anyị aka nke ọma. A ga -enwe ohere maka ndị nwere ọhụụ na oke ohere irite uru na mgbanwe a. Gọọmentị, na -ele anya mgbe niile maka ntuli aka, nwekwara ike jiri anya ha mee ihe maka obere oge. Mana n'ikpeazụ, ọ bụ, ihe ijuanya, ndị ọrụ nkịtị, nwere mmasị na mkpa nke ha, onye ga -enwe okwu ikpeazụ.
Ejima Dijitalụ - TCP / IP ọhụrụ?
Ebe anyị ma ihe ga -eme, ọbụlagodi na anyị anaghị ahụ mgbanwe mgbanwe, anyị ga -adịrị njikere maka mgbanwe ahụ. Anyị maara na iji nlezianya na -eme ihe ga -adị mkpa maka ndị ghọtara mmetụta nke ahịa jikọtara ụwa ọnụ ebe uru agbakwunyere abụghị naanị na -egosi na ihe ngosi ahịa ngwaahịa kamakwa na nzaghachi nke ndị na -azụ ahịa na -enwewanye mmetụta n'ihe banyere ogo ọrụ. O doro anya na ọkọlọtọ ahụ ga -ekere òkè n'ịhụ na nguzozi dị n'etiti inye ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe ndị ọrụ njedebe chọrọ.
Usoro nkuzi a na -enye nghọta site n'echiche onye ode akwụkwọ (Golgi Alvarez) ma gụnye akụkụ sitere na Geospatial World, Siemens, Bentley Systems, na Management Enterprise dị ka ndị isi nnọchite anya Digital Twins na -abịaru nso.
Nkà ihe ọmụma nke ejima dijitalụ
Ọnọdụ na ihe ịma aka na teknụzụ
Ọhụụ nke ọdịnihu na mgbanwe ụlọ ọrụ
Ọhụụ sitere n'aka ndị isi ụlọ ọrụ
enweghị ihe achọrọ
Onye ka eburu n'uche?
ndị hụrụ ọgbara ọhụrụ n'anya
Ndị na - eme ihe atụ BIM
Ndị ahịa ahịa teknụzụ
Ndị na -anụ ọkụ ejima dijitalụ
Previous Post«Previous Exceldị Excel - aghụghọ dị elu na CAD - GIS na Macros
Next Post Ibu wepu ihe BIM 5D n’eji Revit, Navisworks na DynamoNext »